Ma taqaannaa halka ay iskaga maqaam yihiin Somaliland & kooxda Sheriff Tiraspol ee ka qaybgeleysa CL | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ma taqaannaa halka ay iskaga maqaam yihiin Somaliland & kooxda Sheriff Tiraspol...
Ma taqaannaa halka ay iskaga maqaam yihiin Somaliland & kooxda Sheriff Tiraspol ee ka qaybgeleysa CL
(Hadalsame) 19 Sebt 2021 – Sheriff Tiraspol ayaa sanadkan markii ugu horreeysey ka qayb qaadanaysa Champions League iyadoo weliba Arbacadii 2-0 dirtay kooxda dhibka badan ee Shakhtar Donetsk oo sanadkii hore reebtay Inter Milan.
Kooxdan ayaa sidoo kale ah kooxdii ugu horreeysey ee Moldovan ah ee usoo baxda CL, Yeelkeede, magaalada ay ka timaado ee Tiraspol maba aqoonsana dalka Moldova waloow ay weli ka dheesho horyaalka dalkaasi ee Divizia Nationala.
Ha yeeshee, waxay dadka magaaladan deggani isu arkaan inay yihiin caasimadda dal la yiraahdo Transnistria oo sheegay inuu Moldova ka go’ay kaddib burburikii Midowgii Soofiyeeti.
UEFA, ayaa maadaama aan dalkaa la aqoonsanayn waxay Sheriff Tiraspol kala doorransiisey inay ka maqnaadaan CL iyo inay ku ciyaaraan magaca koox ka socota calanka iyo dalka Moldova.
Kooxdan ka socota gobolka Transnistria ayaa isreebreeb-horaadkii ugu dambeeyey soo reebtay Dynamo Zagreb oo ay 3-0 uga faraxalatay si ay ugu soo baxdo heerka guruubyada Champions League.
Transnistria ayaa maqaam ahaan la mid ah Somaliland oo 1991-kii sheegtay inay ka go’day Somalia, balse aanu jirin cid aqoonsatay, waxayna kooxda Sheriff la mid tahay sidii koox ka socota Hargaysa oo laakiin ku ciyaaraysa magaca Somalia.
Previous articleSu’aalo ka badan jawaabaha la hayo oo ka dhashay dhismihii Garoonka Buule Burde ee la burburiyey + Sawirro
Next article”Sidee dal dhami ugu kala daadan karaa kiiska Ikraan Tahliil?!” – Washington Post oo far fiiq sameeyey